Hadda iska ilow COVID: Xaqiiq Cusub iyo Fursad Safarka iyo Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Hadda iska ilow COVID: Xaqiiq Cusub iyo Fursad Safarka iyo Dalxiiska
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Faallo • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha WTN
Omicron lama joojin karo. Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqadan cusub, maxay yihiin fursadaha cusub ee socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah?
Kala duwanaanshaha Omicron ee COVID-19 wuxuu ku faafaa si ka dhakhso badan kala duwanaanshaha Delta. Waxay ku sii jirtaa mareenka sare ee neef-mareenka mana weerarto sambabada, sida ay sheegtay Waaxda Sayniska Caafimaadka ee Thailand.
Dr. Supakit Sirilak, oo ah agaasimaha guud ee waaxda, ayaa sheegay in kala duwanaanshaha Omicron uu inta badan ku haray mareenka neef-mareenka sare. Waxay ku faaftaa 70 jeer ka dhakhso badan kala duwanaanshaha Delta. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshaha Omicron ma waxyeelo u gaysanin sambabada sida nooca Delta loo yaqaan.
Thailand gudaheeda, 50% dadka laga helay kala duwanaanshaha Delta waxaa la seexiyay isbitaalada halka heerka kiisaska Omicron uu ahaa 20-25%.
Boqolkiiba kiisaska Omicron ee loo qoondeeyay dadka safarka ah waxay ka kaceen 25% ilaa 53%. 205 ka mid ah kiisaska Omicron ee Boqortooyada, 180 waxay ahaayeen booqdayaal iyo 25 kale waxay ahaayeen Thais kuwaas oo aan ka tagin dalka laakiin la kulmay booqdayaasha.
Waxa kaliya oo loo qaadan karaa isbeddel la mid ah inuu run yahay gobollada kale ee caanka ku ah socdaalayaasha. Hawaii tusaale ahaan, in ka badan 2205 xaaladood oo COVID ah ayaa la diiwaangeliyay Axaddii oo keliya. Marka la barbar dhigo 100 kiis maalin uun ka hor oo sababay in Gobolka Hawaii oo dhan xidhmo, tiro 2205 ah ayaa ka baxsan male awaalka. Isla mar ahaantaana, Hawaii waxay rajaynaysaa tiro rikoor ah oo booqdayaal ah inay yimaadaan Sannadka Cusub. Dadka oo dhan ee loogu talagalay Aloha Gobolku waa in ka yar 1.5 milyan.
Faransiiska, rikoorkii ugu xumaa ee kororka tan iyo markii uu cudurku dillaacay ayaa maanta dhab ah.
Xaqiiqo cusub oo dalxiiska ah?
Kaliya maaha Thailand, France, ama Hawaii, waxay u muuqataa in COVID aan la joojin karin. Tallaalku wuxuu yarayn doonaa khatarta ah natiijo halis ah. Sida hargabka iyo fayrasyada kale, Omicron wuxuu ina barayaa casharka xaqiiqada cusub ee dalxiiska.
Weji-gashiyadu waxay caawiyaan si ay u ilaaliyaan dadka kale, N-95 ama KN-95 waji-xidhka ayaa sidoo kale caawiya si aad naftaada u ilaaliso. Gacmaha oo la dhaqo iyo kala fogaanshiyaha bulshada waa wax lagu farxo.
Kiniin cusub oo Pfizer ah oo ka hortagaya horumar halis ah marka fayraska la qabanayo, COVID-19 iyo gaar ahaan Omicron hadda waa la maarayn karaa.
Waxaa laga yaabaa in xaqiiqda murugada leh ay tahay, in bini'aadamka intiisa badan ay ugu dambeyntii qaadi doonaan fayraska, tiro yarna aad ayey u bukoon doonaan oo tiro ka yarna ma noolaan doonaan.
Tani waa xaqiiqo cusub, laakiin kama duwana ama ka cabsi badan marka loo eego hargabka iyo cudurro kale oo badan oo la yaqaan.
Sidee ayay tahay in hoggaamiyeyaasha dalxiisku ay xoogga saaraan sidii ay xaqiiqadan cusub u shaqayn lahayd?
Markaad eegto tirooyinka hadda sii faafaya, qofku wuxuu su'aal gelin karaa haddii ay macno samaynayso in laga qariyo qaadista fayraska?
Hogaamiyayaasha siyaasada iyo xirfadlayaasha dalxiiska ayaa bilaabay inay fahmaan xaqiiqadan cusub. Iyaga oo aan odhan, waxay horeba u hirgeliyeen fikradda ah in hawlaha iyo dhaqaaluhu ay sii socdaan.
Ma jiri doono hadda wixii ka dambeeya burbur, jirro, iyo dhimasho laga badbaadi karo. Waxay qayb ka noqon doonaan xaqiiqada cusub waana inay qayb ka noqdaan qorshaha cusub.
Baafinta xiriirka ayaa noqoneysa mid aan macquul aheyn, sidoo kale waa xirid iyo xannibaado.
Waxay u muuqataa furaha tallaalka, xoojinta, kaniiniga lagu daweynayo, ku raaxaysiga nolosha, iyo caqli-galnimada.
Juergen Steinmetz, qoraaga maqaalkan, ahna Guddoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka .
WTN waxay doonaysaa dood cusub iyadoo la tixgelinayo xaaladda dhabta ah, iyadoo la tixgelinayo waxa suurtagal ah iyo waxa aan suurtogal ahayn, lagana fiirsanayo in horay loo socdo si loo soo saaro safarka iyo warshadaha dalxiiska, iyada oo lala kaashanayo xaqiiqda cusub ee COVID-19 iyo Omicron ayaa ku talinaya, iyada oo aan la soo gudbin. .